Bloemfontein (bluːmfɒnteɪn /; Afrikaan: [blumfɔntəi̯n]; Afrikaans iyo Dutch ilo ubax ama ilo-xayiraad, oo sidoo kale loo yaqaan Bloem) waa caasimadda gobolka ee gobolka Free of South Africa ; iyo, sida caasimadda garsoorka ee qaranka, [mid ka mid ah saddexda caasimadood ee Koonfur Afrika ee saddexda ah ee qaranka (labada kale waxay yihiin Kab town, caasimada sharci-dejinta, iyo Pretoria, caasimada maamulka) oo ah magaalada toddobaad ee ugu weyn ee Koonfur Afrika. Ku dhowaad 1,395 m (4,577 ft) oo ka sarreeya heerka badda, magaaladu waxay u jirtaa qiyaastii 520,000 deganayaasha waxayna ka kooban tahay qayb ka mid ah degmada Mangaung caasimadda oo leh dad tiradoodu tahay 747,431.
Magaalada Bloemfontein waxay martigelisaa Maxkamadda Sare ee Racfaanka Koonfur Afrika, Franklin Game Reserve, [loo baahan yahay] Naval Hill, Resort Masellpoort iyo Sand du Plessis Theater. Magaaladu waxay ku taallaa matxafyo badan, oo ay ku jiraan Taageerada Qaranka ee Qaranka, Matxafka Dagaalka Anglo-Boer, Matxafka Qaranka, iyo Matxafka Farshaxanka Oliewenhuis.
Bloemfontein ayaa sidoo kale martigelineysa qorshaha ugu horreeya ee sahaminta Afrika ee sahaminta kowaad, Naval Hill Planetarium iyo Boyden Observatory, oo ah kormeer cilmi baaris oo cilmi baaris ah oo ay dhistay Jaamacadda Harvard.
Bloemfontein waa dad caan ah oo gabay ahaan loo yaqaan magaalada ubax, iyada oo ay u badan tahay ubaxyada iyo xafladaha sanadlaha ah ee Rose. Magaca Setswana ee magaalada waa Mangaung, oo macnaheedu yahay meesha qoob ka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bloemfontein&oldid=184361"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 31 Oktoobar 2018, marka ee eheed 00:24.